Wasiirka Maaliyadda oo dhagax dhigay dhismaha xarunta ilaalada canshuuraha | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka Maaliyadda oo dhagax dhigay dhismaha xarunta ilaalada canshuuraha
Wasiirka Maaliyadda oo dhagax dhigay dhismaha xarunta ilaalada canshuuraha
wasiirka maaliyada soomaaliya ayaa dhagax dhigay xaruumo loo adeegsanyo Aaladaha bixiinta canshuuraha dalka waxay qayb ka yihiin horumarinta adeegyada canshuuraha.
Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ugu horeyn dhagax dhigay dhismaha xarunta ciidanka ilaalada canshuuraha kuwasoo loo yaqaan turubataariyada iyadoo saldhig u noqon doonta hannaanka hagaajinta qaadista canshuurah.
“ Waan ku faraxsanahay in aan dhagax dhignay xaruntii canshuur ilaalinta ama turabataariyo ciidanka ee canshuurta qaada,ayaa gundhiga u ah uruurinta canshuuraha iyadoo la raacayo sharciga dalka u dhigan,” ayuu yiri Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda XFS.
Wasiir MAaliyadda ayaa sidookale kale dhagax dhigay dhismaha machadka dhaqaalaha dalka iyo 5 xarumood kale oo loogu talagalay canshuuraha waxaana uu tilmaamay dhismaha shirkadaha maxaliga ay u tartameen kuna guuleysteen shirkadaha ka shaqeyanaya oo la filayo inay dhismaha dhameystiraan bisha Luulyo ee sanadkaan.
Wasiirka Maaliyadda ayaa sheegay in ay sidoo kale dhagax dhigeen ilaa shan xarumood oo loogu talgalay in canshuuraha, dhanka kalan waxa qayb ka ahaa xarumaha maanta ladhagax dhigay machadka dhaqaalaha dalka,waxaana uu tilmaamay in ay dhismaha shirkadaha maxaliga ku tartameen kuna guuleysteen shirkadaha ka shaqeyanaya ayaa lafilaya in ay soo dhammeystiraan bisha Luuliya ee sanadkaan.
Previous articleMaxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ka tacsiyadeeyay geerida Wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil
Next articleToos:-Ra’iisul wasaaraha XFS iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Kismaayo